Tsy mety amintsika mihitsy ny bileta tokana
2007-10-23 @ 07:29 in Politika
Lamaody ve sa fiheverana fa izay no fomba tsotra indrindra hialana amin’ny halabato? Ambetintenin’ny avy amin’ny mpanohitra manontolo ka nakany mandrakariva ny fon’ny FFKM [Fiombonan’ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara] hatrany ny momba ity bileta tokana ity. Savily hialana amin’ny tsy fananan’ny mpanohitra vola intsony araka ny fijeriko azy no tena antony hamerimberenana ity lazaina fa tsy maintsy tanterahina raha te-hahita ny mpanohitra handray anjara amin’ny fifidianana ny ao amin’ny fitondrana.
Dia sambany tokoa raha ho tontosa ihany vao hiray feo ny avy amin’ny fanoherana hiara-mitaky ny hampanaovana ny fifidianana ami’ny alalan’ny latsabato tokana fa misy ny lisitra maro isafidianana kosa. Raha nandre ny fanambarana aho dia tsy izay nolazain’ny mpitondra teny no henoko fa izay nanakoako tao anatiko tao fotsiny manao hoe:
Efa fantatrareo mpifidy fa tsy manambola intsony izahay mpanohitra hifaninanana amin’ny avy ao amin’ny fitondrana amin’io fifidianana ho Ben’ny tanàna sy mpanolotsaina ao amin’ny tanàna io ka dia aleonay tsy mirotsaka. Fantatrareo ihany koa fa sady tsy tianareo izahay mpanohitra no misy tsy zakanareo ihany koa ny ataon’ny ao amin’ny fitondrana ka izay no nahakamo anareo tsy hifidy tamin’ny farany teo. Dia mody nailakay fa efa tsy matoky ny fitondrana intsony ny vahoaka matoa kamo nifidy tamin’ny farany teo nefa fantatray fa izahay koa tsy itokisanareo intsony dia aleonay aloha mody midradradradra sao mahavoa ihany ny goavy manta.